जनसन 5.5 HP Seahorse धुन-अप परियोजना | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
ट्युन अप अप परियोजनाहरु र पार्ट्स खरीदारी साइट
Evinrude र जनसन 1979 र यसअघि
ZEPHR SAIL DRIVES
सुरु गर्नु पहिले
LighTwin मालिक म्यानुअल
मूल Lightwin पार्ट्स म्यानुअल
मोडेल # फेला
जनसन 5.5 HP Seahorse
दबाव इन्धन ट्यांक चेतावनी
5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी-17
जनसन 10 HP Seahorse
एल्यूमीनियम मत्स्य पालन नाउ पुनर्स्थापना
आगन्तुक परियोजना Pics
एल्यूमीनियम नाउ पुनर्स्थापना
पुस्तकहरू - सेवा मर्मत पुस्तिका
/ बाहिर लग
लगिन Facebook संग
जनसन 5.5 HP Seahorse धुन-अप परियोजना
लग - इन or दर्ता टिप्पणी पोस्ट
तपाईँले यो जनसन 5.5 HP Seahorse, वा यस्तै धुन-अप परियोजना एक टिप्पणी वा प्रश्न छ भने, तिनीहरूलाई तलको छोड्न गर्नुहोस्। तपाईं पर्छ लग - इन तपाईं टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भने।
अब तपाईं आफ्नो फेसबुक खातामा लग इन गर्न सक्नुहुन्छ।
बुझाउने सेन 952 सोम मा, 09 / 11 / 2017 - 08: 15
निचाइ इकाईमा बाइन्डिंग
मैले ध्यानपूर्वक सबै कुरा देखेको छु र थाहा छैन कि किन एकपटक मेरो सम्पूर्ण मोटर माथिल्लो एकाइमा सबै चीजहरू पुनःसम्पल गरिन्छ र नि: शुल्क र सामान्य छ तर पुल सुरु धेरै गाह्रो हुन्छ र म्यानुअल रूपमा प्रो स्पिन गर्ने प्रयास गर्दा यो धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ कुनै पीस वा दस्तक शोर छ, कुनै पनि ठाउँबाट बाहिर निस्कन्छ यो सिर्फ नि: शुल्क कताई छैन ... कुनै पनि मद्दत भयानक छ।
बुझाउने ttravis गुरु मा, 09 / 14 / 2017 - 11: 58
के तपाईंले नयाँ मुहरमा राख्नुभयो? ...
के तपाईंले नयाँ मुहरमा राख्नुभयो? केहि समय नयाँ सीलले केहि समयको लागि तंग लाग्न सक्छ। नयाँ प्रवर्तकसँग समान छ। यसलाई तोड्न केही घण्टा दिनुहोस् र हेर्नुहोस् यदि चीजहरू सुधार्नुहोस्।
बुझाउने सेन 952 गुरु मा, 09 / 14 / 2017 - 21: 00
जवाफ के तपाईंले नयाँ मुहरमा राख्नुभयो? ... by ttravis
मैले सीलहरू रिडोन गरेन ...
मैले निम्न इकाईमा छापहरू वा केही चीजहरू पुन: सुनेको छु किनकि म धेरै उलझन भएँ।
बुझाउने ttravis मा शुक्र, 09 / 15 / 2017 - 12: 00
जवाफ मैले सीलहरू रिडोन गरेन ... by सेन 952
के हुन्छ भने के हुन्छ भने ...
यदि तपाईंले फ्लाईवाहेललाई हातले घुम्न प्रयास गर्नुभयो भने, वा रस्सी प्रयास गर्न पुरानो ढंगले यो सुरु गर्न प्रयासको वरिपरि एक रस्सी लिपि गर्ने?
के के हुन्छ भने तपाईले निचो ईकाई बन्द गर्नुहुन्छ र यसलाई सुरू गर्ने प्रयास गर्नुभयो?
बुझाउने stubnt गुरु मा, 03 / 22 / 2018 - 21: 17
कहाँ बिन्दुमा राख्नुहुन्छ?
म 1956 जॉनसन सीडी-13A 5.5hp जुड़वाँमा कोइल र बिन्दु / कन्सेन्सरको प्रतिस्थापन गर्दैछु।
म बिटामिटर विधि द्वारा बिन्दु ग्याम्प र समय सेट गर्ने प्रयास गर्दैछु।
तपाईं थ्रेसहोटल को समय को जाँच गर्न को लागि र बिंदु अंतर निर्धारित गर्न को लागी राख्नुहुन्छ? मैले केही देखेका छु कि निष्क्रिय छ, र अरूले WOT भन्नुहुन्छ। केहि भन्छन् कि यसले कुनै फरक पार्दैन, तर यसले मलाई अर्थ बुझ्दैन।
थोरैटलले प्लेट र टाइम म्याग्स चलाउँछ, त्यसैले यसले फरक पार्छ जहाँ थोरै छ।
के म हराइरहेको छु? धन्यवाद
बुझाउने तर, मा मंगल, 04 / 03 / 2018 - 13: 26
जवाफ कहाँ बिन्दुमा राख्नुहुन्छ? by stubnt
मैले भर्खरै3एचपी Lightwin गरे ...
मैले पहिलो पटक एक3एचपी प्रकाशविन गरे र त्यस प्रकारले मलाई फेंक्यो जब सम्म मैले देखेँ र देखेँ कि यद्यपि प्लेटले क्यामेराको सम्बन्धमा चल्दछ, अंकहरू अंकसँग रहन्छ, त्यसैले यसले कुरा गर्दैन। तथ्यको रूपमा, समय सेट गर्दा, यदि तपाइँ "सुरूवात" स्थितिमा सुरू गरिसकेपछि आफ्नो मार्क overshoot गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बिन्दुहरू क्यामेरामा अर्को दिशामा सार्न सक्नुहुन्छ। तर, मैले यो स्थितिलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय गरेँ र जब मैले गरेँ, मोटर म फ्री भाग्यो जस्तो कि जस्तो लाग्छ ... लगभग $ 30 मा टिनअप भागहरूमा।
त्यसो त, तल लाइन, यो वास्तवमा कुरा गर्दैन, तर हातमा आधारित आधारमा अरू भन्दा कम स्थानहरूमा बढी सुन्न सकिन्छ। मोटरसाइकल खुसी!
बुझाउने tonyr123 सोम मा, 04 / 01 / 2019 - 09: 59
मैले सबै ठाँउमा फिर्ता राखेको छु, कम इकाई, कार्बोरेटर मा नयाँ डिस्प्ले, र नयाँ प्लग। यो एक मिनेटको लागि दौड्छ र पहिलो पटक मर्यो र दोस्रो पटक मात्र एक मृत्युको सही तरिका सुरू गर्नुहोस्।
कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ ....
बुझाउने फिशर मा मंगल, 04 / 16 / 2019 - 20: 56
1960 जॉनसन समुद्री घोडा CD-17 पावर यूनिट मद्दत
मेरो 1960 जॉनसन Seahorse 5.5 पुन: मजा मजा गर्न
म सडक ब्लकमा आएको छु। केस विभाजन गर्न र सिलिन्डरहरू हड्डी र पिस्टन र पङ्क्तिहरू बदल्न कसैलाई पत्ता लगाउन सक्दैन। यदि मैले पिस्टन र रिंगहरू पनि राम्रो गर्न सक्थे भने मेरो आफ्नै प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ।
बुझाउने ttravis Wed, मा, 06 / 12 / 2019 - 14: 49
जॉनसन 5.5 HP4भाग भिडियो पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
कसैले एक टिप्पणी छोड्यो कि उनि जॉनसन एक्सएनमक्स को पुनर्स्थापित गर्न4भाग यूट्यूब भिडियो को खोज रहे थिए। मूल टिप्पणी गुमाएको थियो किनभने मैले यो साइट (कहिलेकाँही हुन्छ) खरिद गर्यो र एक ब्याकअपबाट पुनर्स्थापना गर्न थाल्नु पर्ने केहि दिन भयो।
मलाई यो लाग्छ यूट्यूब खोजी तपाईंले खोज्दै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ।
म पछि यसको समीक्षा गर्न समय लिन सक्नुहुनेछ र सम्भवत यो साइटमा थप्नुहोस्।
क्षमा गर्नुहोस्, मैले मूल टिप्पणी गुमाएँ।
बुझाउने प्यारामाउन्टएक्सएनयूएमएक्स मा मंगल, 09 / 24 / 2019 - 19: 41
1958 5.5 hp CDL-15 मोटर्सको लागि रंग कोड?
के त्यहाँ कसैलाई मरुन रंगीन 1958 जोन्सन 5.5 hp CDL-15 मोटर को लागी वास्तविक रंग रंग कोड थाहा छ? र यदि हो भने, यो के हो? म यस सुन्दर मोटरको पुनर्निर्माणको बीचमा छु र मोटरको गहिराइ र गहिराइमा पसे पछि मैले निर्णय गरें, "हेक, के छ? अब यो पनि रंग्न सक्छ।" यस सम्बन्धमा कुनै मद्दत सबै भन्दा सराहना गरिन्छ। धन्यवाद!
बुझाउने fabelknap Wed, मा, 09 / 25 / 2019 - 07: 59
जवाफ 1958 5.5 hp CDL-15 मोटर्सको लागि रंग कोड? by प्यारामाउन्टएक्सएनयूएमएक्स
पेंट कोड यकिन छैन, तर ...
पेंट कोड यकिन छैन, तर केवल तलको लि paint्कको खाली पेन्ट किन्नुभयो र 1955 redid गर्नुभयो, यो उत्तम भयो। मान्छे को अन्य रंग पनि छ।
बुझाउने fabelknap Wed, मा, 09 / 25 / 2019 - 07: 53
ईन्धन पम्प रूपान्तरण मुद्दा
मैले इन्धन पम्प रूपान्तरण गरे 1955 5.5 HP Johnson Seahorse प्रेस गरिएको ट्या tank्कीबाट सिफन शैली ट्या tank्कमा। मैले पत्ता लगाएको एक मुद्दा भनेको भ्याक्यूम लाइन अफ अफ इनसेक ग्यासले भरिन्छ लगभग 1 /2घण्टाको दौडान पछि। यसले ईन्धन पम्प लाईनको ईन्धनको स्लगबाट भ्याकुम पल्सको अभावबाट पम्प गर्न रोक्दछ। के अरु कसैसँग यस मुद्दा भएको छ, वा यसको लागि निश्चित छ?
तलको लिंक निर्देशनहरू अनुसार रूपान्तरण गरियो। धन्यवाद
बुझाउने प्यारामाउन्टएक्सएनयूएमएक्स सोम मा, 09 / 30 / 2019 - 20: 10
यो 1958 "सिहर्सस" को लागि र the र color्ग सम्बन्धी जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पेन्टको पहिलो कोट स्प्रे गरेको केही समय पहिले र यो सुकिंदै जाँदा मैले यो टाइप गरें। यो वेबसाइट अद्भुत छ। तपाईंले मेरो पुनर्निर्माण परियोजना "राग ट्याग" बाट धेरै "पेशेवर" परियोजनामा ​​परिवर्तन गर्नुभयो। राम्रो छ! मलाई आशा छ कि छिटै सम्पन्न भए पछि फोटो पोस्ट गर्छु। पुनः धन्यवाद।
यो साइट खोजी
भाषा अनुवाद चयन गर्नुहोस्
भाषा चयन गर्नुहोस्अंग्रेजीअफ्रिकीअल्बेनियन्अरबीआर्मेनियालीअजरबैजानीबास्कबेलारुसीबंगालीबोस्नियालीबुल्गेरियालीकातालानसेबुआनोचिनियाँ (सरलीकृत)चिनियाँ (परम्परागत)क्रोएसियालीचेकडेनिसडचएस्पेरान्तोइस्टोनियालीफिलिपिनोफिनिसफ्रान्सेलीगलिसियालीजोरजियनजर्मनग्रीकगुजरातीHaitian Creoleहोउसाहिब्रूहिन्दीह्मोङहंगेरीआइसल्यान्डिकईग्बोइन्डोनेसियालीआइरिसइटालियनजापानीजाभीकन्नडखमेरकोरियालीलाओल्याटिनलातवियाईलिथुआनियनम्यासेडोनियनमलायामालटिस्माओरीमराठीमङ्गोलियननेपालीनर्वेजियनफारसीपलिशपुर्तगालीपंजाबीरोमानियालीरूसीसर्बियनस्लोभाकस्लोभेनियालीसोमालीस्पेनिशस्वाहिलीस्विडिशतामिलतेलुगुथाईटर्कीयुक्रेनीउर्दूभियतनामीवेल्शयिद्दिसयोरूबाजुलु
यो साइटलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्
मा खरीद गर्न अघि कृपया माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अमेजन or eBay। अन्तर्राष्ट्रिय शपर्स स्वागत छ
इभिनरूड जॉनसन सुजुकी आउटबोर्ड र स्टर्न ड्राइभको लागि प्रोपेलरहरू
एल्युमिनियम र स्टेनलेस स्टील
ड्राइभ शियर पिनहरू
सबै ब्रान्डहरूको लागि मिशिगन व्हील प्रोपेलर क्याटलग
चैंपियन स्पार्क प्लगहरू
ईनि्रूड आउटबोर्डका लागि
जॉनसन आउटबोर्डको लागि
बुध आउटबोर्डका लागि
यामाहा आउटबोर्डका लागि
होंडा Outboards को लागि
आधिकारिक चैंपियन पार्ट्स फाइनर
स्पार्क प्लग क्रस सन्दर्भ
प्रयोगकर्ता खाता मेनु
विषय द्वारा Danetsoft र Danang Probo Sayekti प्रेरित Maksimer